Etu ị ga - esi amata onye mebirila m na Instagram | Gam akporosis
Etu ị ga-esi amata onye mebirila m na Instagram
Jose Alfocea | | Ngwa gam akporo, Gam akporo Ndị aghụghọ
You nwere ike ịchọpụta onye kwụsịrị iso gị na Instagram? Instagram, netwọk mmekọrịta nke Facebook nwere nke a mụrụ dị ka netwọkụ gbadoro anya na ịkekọrịta foto, na-eto site na mmali na oke. Mmelite ya na nso nso a, tinyere ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ (kwuo asịrị ndị e si na Snapchat depụtaghachi?) Emeela ka uto a na-enwetụbeghị ụdị ya. N'oge na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ ahụ kwupụtara na ya nwere ihe karịrị ndị ọrụ 800 nde na ụwa, nke 500 nde na-abanye na netwọk kwa ụbọchị. Site na ọnụ ọgụgụ ndị a n'aka, ma na-ele anya na ọganiihu ya, ọ bụghị ihe ijuanya na n'ime ọnwa iri na abụọ ruo ọnwa iri na asatọ, Instagram karịrị otu ijeri ndị ọrụ.
Nakwa site na ọnụ ọgụgụ ndị a n'aka, ọ dị mfe ịghọta ihe kpatara ndị ọrụ Instagram chọrọ ịmata ọ bụghị naanị ndị na-eso ha, kamakwa ndị na-emeghe ha. Agbanyeghị, Instagram, dị ka ọtụtụ netwọkụ mmekọrịta ndị ọzọ, anaghị eme ka ọ dị mfe. Ọ dabara nke ọma, taa anyị ga-aza ajụjụ a kedu ka esi amata onye mebirila m na Instagram. Tụkwasa m obi, ọ dị mfe karịa ka ị chetụrụla.
1 Instagram: onye tinyegoro m?
2 Ngwaọrụ iji mata onye kwụsịrị iso m na Instagram
2.1 Anwụrụ ọkụ
2.2 Ntinye maka Instagram
2.3 Ndị na-eso ụzọ na ndị na-eso mmụọ maka Instagram
2.4 Enyocha ndị na-eso ụzọ maka Instagram
2.5 Ntinye maka Instagram
Instagram: onye tinyegoro m?
N'etiti ọha mmadụ ihe ọmụma, akụkụ dị ukwuu nke ndụ anyị na-egosipụta na netwọkụ mmekọrịta, nke dịịrị onye ọ bụla (na ụlọ ọrụ), yana mebere “uringzipu” dị ukwuu, ma dịkwa mkpa karịa, izipu na ụwa nkịtị. Instagram, dị ka ọtụtụ netwọkụ mmekọrịta ndị ọzọ, mere ka anyị nwekwuo onwe anyị na ùgwù onwe onye n'ụzọ nke na, ka anyị "nwekwuo" mmasị, anyị na-ekwukwu okwu ọma, na-ekwu karịa, mbak, ka mma anyị na-eche banyere onwe anyị.
Agaghị m abanye na arụmụka banyere ịdị mma ma ọ bụ na ọ bụghị, ma ọ bụ na ọ pụtara na ndụ n'ezie nke ndị mmadụ, anyị ka mma ịhapụ nke ahụ maka ọkwa ọzọ, mana ihe doro anya bụ na, otu ugwu ahụ nke ndị mmadụ na-elekọta netwọkụ anyị na-eduga n'ịchọ ịkwụsị ịgbaso onye kwụsịrị iso anyị. Kedu ihe ọ bụ banyere ikesa ọkacha mmasị na ịgbaso n'efu?
Mana mgbe anyị hụrụ na ọnụọgụ ndị na-eso ụzọ anyị belatara, olee otu anyị ga-esi mara onye kwụsịla iso anyị? Dịka anyị kwurula, Instagram anaghị eme ka ọ dịrị anyị mfe. Anyị nwere ike ịga na ndepụta ndị na - eso ụzọ anyị, ma ọ bụrụ na anyị nwere naanị ole na ole, anyị nwere ike ịhapụ ngwa ngwa otu, mana gịnị ga - eme ma ọ bụrụ na ị nwere narị otu narị, ọtụtụ puku ndị na - eso ụzọ na Instagram? Ọ gaghị ekwe omume. Mana ihu ọma, enwere ngwaọrụ ndị ga - enyere anyị aka mara ngwa ngwa na ngwa ngwa onye kwụsịrị iso m na Instagram.
Ngwaọrụ iji mata onye kwụsịrị iso m na Instagram
Ma Twitter, ma ọ bụ Facebook ma ọ bụ Instagram ma ọ bụ ọtụtụ netwọkụ mmekọrịta ndị ọzọ emeghị ka ọ dịrị anyị mfe ịchọpụta onye na-esoghị anyị. Ihe kpatara ya dị mfe n'ihi na, ọ bụrụ na ha mere, anyị ga-emeghekwa ndị ọrụ ahụ, mmekorita ga-ebelata yana ya, mgbasa ozi ha bi na ya ga-ebelata na uru. Ama m, ọ bụ nkọwa dị oke mfe, mana ọ na-enye anyị ohere ịmata ihe ihe a bụ.
Yabụ, na-ewepụta ezigbo azụmaahịa azụmaahịa ka ha pụta ọrụ na ngwa nke anyị nwere ike ịchọpụta onye kwụsịrị iso m na Instagram. Ọtụtụ n'ime ha nwere nsụgharị akwụ ụgwọ dị mma maka ndị ga-ejikwa ọtụtụ akaụntụ dị ka njikwa obodo, agbanyeghị, nhọrọ nnwere onwe dị irè maka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ. Ka anyị lelee ụfọdụ ngwa na ọrụ ndị a.
Otu n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu na nke eji eme ihe, ma na nke onwe ya, bụ Anwụrụ ọkụ. Ọ bụ ngwa nbudata n'efu maka gam akporo na iOS, yana ị nwekwara ike iji ya na ụdị web ya.
Ozugbo ibudatara ngwa ahụ wee banye na akaụntụ Instagram gị (ị nwekwara ike iji ya na profaịlụ Twitter gị), ị nwere ike hụ ndị ọrụ niile ahụ ị na-eso mana ndị na-anaghị eso gị. Ihe ị ga - eme bụ pịa bọtịnụ uhie na - egosi aka nri nke onye ọ bụla n’ime ha ka ị nwekwara ike ịkwụsị iso ha.
Mana ihe kachasị amasị anyị ugbu a bụ ngalaba "Ndị na-adịbeghị anya". Ebe ahụ ị ga-enwe ike ịhụ ndị ọrụ, ndị ọrụ na kọntaktị ndị kwụsịrị iso gị Na Instagram. Dị ka ọ dị na mbụ, pịa bọtịnụ uhie na-esote nke ọ bụla n'ime ha ma ị ga-enwe ike ịkwụsị iso ha, ọ bụrụ na ọ bụ ihe ị chọrọ ime.
Versiondị nweere onwe ya nke Crowdfire nwere naanị narị abụọ ndị na-achọghị ịnabata otu ụbọchị, ọnụọgụ dị oke elu nke na ị gaghị achọ atụmatụ ọ bụla. Ma n'ezie, ọ nwekwara ọtụtụ ọrụ bara uru nke iji ị ga-enwe ike ijikwa njikwa profaịlụ gị nke Instagram na-arụ ọrụ nke ọma karị, karịrị na ngwa gọọmentị nke netwọkụ mmekọrịta.
Oké Ìgwè mmadụ: Gị Smart Ahịa
Developer: Okpukpo oku
Ntinye maka Instagram
Ngwa ọzọ anyị nwere ike iji mara onye kwụsịrị iso m na Instagram bụ "Unfollowers maka Instagram", a ọrụ na pụtara pụtara aha na a ukwuu mba nke 4,6 nke ise na Google Play Store.
Ọ bụ ngwa a na - akwụghị ụgwọ kpamkpam, yabụ na ọ nwere mgbasa ozi, yana nke, ị banyechara profaịlụ Instagram gị, ị nwere ike zute ndị na-alaghachibeghị ndị na-eso ụzọ, ndị kwụsịrị ịkwụsị gị na ọbụna nye "ndị na-eso mmụọ mmụọ", bịanụ, ndị dị ma ọ bụghị na ndị emebeghị ihe n'akwụkwọ iri gara aga gị. Ma n'ezie, ị nwekwara ike kwusi iso onye obula kwusi iso gi na Instagram naanị site na ịpị bọtịnụ aka nri nke profaịlụ gị.
Ndị na-eso ụzọ na ndị na-eso mmụọ maka Instagram
Ngwa ọzọ dịka nke gara aga bụ "Ndị na - eso ụzọ na ndị na - eso Ghost maka Instagram". Na a kpachara anya, ịchọta anya na nghọta, ị ga-enwe ike ịmata onye kwụsịrị iso gị, onye laghachitara ndị na-eso ya na ndị ghost ndị anyị kwurula na mbụ. A) Ee, i nwere ike ịkwụsị iso ha ozugbo site na ngwa n'onwe ya.
"Ndị na-eso ụzọ na ndị na-eso mmụọ maka Instagram" nwekwara nnukwu akara nke 4,5 n'ime ise na fivelọ Ahịa Play, agbanyeghị, ọ na-enwe nsogbu mgbe ụfọdụ na akaụntụ nke karịa ndị na-eso ụzọ 20.000. Maka ndị ọzọ, ọ bụ ngwa n'efu (ọ na-enye ihe mgbakwunye zuru oke) ị nwekwara ike ịnwa ịchọpụta onye kwụsịrị iso gị na Instagram.
Enyocha ndị na-eso ụzọ maka Instagram
Ngwa ọzọ iji chọpụta onye kwụsịrị iso gị na Instagram site na ngwaọrụ gam akporo gị bụ "Onye na-eso ụzọ maka Instagram", ngwa na-adị mfe ma dịkwa mfe iji na-enye gị ohere jikwaa ma soro ọtụtụ akaụntụ Instagram na inwe ike ịmata onye kwụsịrị iso gị, ma ọ bụ onye laghachitegoro ndị na-eso gị, mana ị ga-enwe ike izute ndị "nzuzo nzuzo gị" na ndị na-eso ụzọ na-agbachi nkịtị bụ ndị, n'agbanyeghị nke a, anaghị enye gị Like ma ọ bụ kesaa ma ọ bụ kwuo na mbipụta gị.
Dị ka ngwa ndị gara aga anyị hụburu, yana «Onye na - eso ụzọ maka Instagram» ị nwekwara ike mepee onye ọ bụla ịchọrọ site na ịpị bọtịnụ dị n'akụkụ profaịlụ ha.
"Nghọta ndị na - eso ụzọ maka Instagram" bụ ngwa enwere ike budata nke na - enye mgbasa ozi yana ịzụrụ ihe ntanetị maka ndị chọrọ atụmatụ ndị ọzọ.
Ndị na-eso ụzọ Insight maka Instagram
Nwee obi ike na anaghị m ekwughachi onwe m. N'agbanyeghị eziokwu na "Unfollower maka Instagram" nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu aha ahụ dị ka "Unfollowers maka Instagram" (naanị ha dị iche site na otu leta), nke bụ eziokwu bụ na ha bụ ngwa dị iche iche mana ha abụọ nwekwara otu ozi ahụ: na ị nwere ike zute ndị ọrụ na-esoghị gị na Instagram ka gi onwe gi we kwusi iso ha.
Dị ka ndị gara aga, iji ya, ị ga-enwerịrị nzere nke Instagram ka ọrụ ahụ wee nwee ike nyochaa profaịlụ gị wee gosi gị ndị na-eso ụzọ na-adịbeghị anya, profaịlụ nke na-alọghachighị ndị na-eso ya na ndị ọzọ. N'ezie, ị ga-enwe ike kwụsị iso ha naanị site na ịpị bọtịnụ na-esote aha profaịlụ gị.
"Unfollower maka Instagram" bụ ngwa nbudata n'efu na-enwekwa ezigbo akara na Google Play Store, 4,6 n'ime ise, yabụ anyị na-akpọ gị oku ka ị nwalee ya.
Na ebe a ka nhọrọ anyị nke ngwa na ọrụ na-abịa mara onye kwụsịrị iso m na Instagram Ma, n'ezie, jiri otu mkpụrụ ego kwụọ ha ụgwọ, na obere ihe ọjọọ na-adịghị njọ na-emerụ ahụ ma na-enyekwa ego ego.
Dị ka ị nwere ike ịhụ, "Crowdfire", "Unfollowers for Instagram", "Onye na-eso ụzọ maka Instagram", "Ndị na-eso ụzọ & Ghost na-eso ụzọ maka Instagram", "Unfollower maka Instagram" na ọtụtụ ngwa ndị ọzọ ị ga-ahụ na Playlọ Ahịa Google Ha na-ewetara otu ebumnuche ahụ, iji jikwaa ma nyochaa profaịlụ gị ma ọ bụ profaịlụ na Instagram n'ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe, na-etinye usoro ọrụ na njirimara niile yiri ibe ha mana nke Instagram anaghị enye iwu. Ewezuga obere nkọwa, ha niile na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ, ha na-emekwa ya nke ọma, ya mere onye ọ bụla n'ime ha ga-emezu nzube gị. Tụkwasị na nke ahụ, ọtụtụ n'ime ha na-enyekwa gị ohere ijikwa profaịlụ nke netwọkụ mmekọrịta ndị ọzọ dịka Twitter, ma ọ bụ nwee ụdị maka ya, dịka ọ dị n'ihe banyere "Insight Insight for Twitter"
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Etu ị ga-esi amata onye mebirila m na Instagram
Xiaomi ga-emeghe ụlọ ahịa mbụ ya na Spain na Nọvemba a
MAZE Alpha International Onyinye Efu